Lama Furi karo Macluumaadka Xogta maxaa yeelay Mashruuca VBA ee ku dhex jira lama aqrin karo
Bogga ugu weyn Products DataNumen Access Repair Lama Furi Karo Xogta Xogta Maadaama Mashruuca VBA Uu Ku Jiro Lama Aqrin Karo
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "Xogta Lama Furi Karo Sababtoo Ah Mashruuca Vba Oo Ku Jiraa Lama Akhriyi Karo" Khalad
Markaad isticmaaleyso Microsoft Access si aad u furto faylka keydka macluumaadka kaydsan, waxaad aragtaa fariinta khaldan ee soo socota (qalad 53) marka hore:
Faylka lama helin
Ogsoonow cinwaanka farriinta qaladka waa "Microsoft Visual Basic for Application", markaa waxay u muuqataa in qaladku sabab u yahay maxaa yeelay faylka VBA lama helin.
Dhagsii badhanka "OK", waxaad heli doontaa farriinta qaladka xigta (qalad 29081):
Database lama furi karo maxaa yeelay mashruuca VBA ee ku jira lama aqrin karo. Kaydinta macluumaadka waxaa la furi karaa oo keliya haddii mashruuca VBA marka hore la tirtiro. Tirtirida mashruuca VBA waxay ka saareysaa dhammaan koodhadhka qaybaha, foomamka iyo warbixinnada. Waa inaad kaydisaa macluumaadkaaga kahor intaadan iskudayin inaad furto keydka macluumaadka oo aad tirtirto mashruuca VBA.
Si aad u abuurto nuqul keyd ah, dhagsii Ka noqo ka dibna nuqul nuqul ah ka samee kaydinta xogtaada. Si aad u furto keydka macluumaadka oo aad u tirtirto mashruuca VBA adigoon abuurin nuqul nuqul ah, guji OK.
Mashruuca Visual Basic ee Codsiyada ku jira keydka macluumaadka waa musuqmaasuq.
Haddii aad ku dhaqaaqdo adigoo gujinaya badhanka "OK" si aad u oggolaato Access inuu furo keydka macluumaadka oo uu masaxo mashruuca VBA, waxaad heli doontaa farriin qalad saddexaad ah (qalad 29072), sida hoos ku xusan:
Microsoft Access waxay ku ogaatay musuqmaasuq faylkan. Si aad isugu daydo inaad dayactirto musuqmaasuqa, marka hore nuqul nuqul ah ka samee feylka. Dhagsii tabta Faylka, tilmaan Manage ka dibna riix Compact iyo Repair Database. Haddii aad hadda isku dayeyso inaad dayactirto musuqmaasuqan, waxaad u baahan tahay inaad dib u abuurto feylkan ama aad dib uga soo celiso keydkiisii ​​hore.
oo macnaheedu yahay Microsoft Access ma furi karo keydka macluumaadka.
Macluumaadka aasaasiga ah ee Helitaanka caafimaadka kama jiraan wax mashruucyo VBA ah haba yaraatee. Si kastaba ha noqotee, musuqmaasuqa awgood, Access wuxuu tixgelin doonaa faylka keydka xogta musuqmaasuqa ku jira oo leh mashruucyo VBA ah iskuna day inuu furo. Ka dib markii uu ku guuldareysto inuu furo faylka, wuxuu soo bandhigi doonaa farriimaha qaladka ee kor ku xusan, taas oo waxoogaa wareersan maadaama feylkii asalka ahaa uusan ku jirin wax mashruucyo VBA ah haba yaraatee.
Xalka kaliya ayaa ah in la isticmaalo badeecadeena DataNumen Access Repair si loo hagaajiyo feylka MDB loona xaliyo qaladkan.
Muunad fayl MDB ah oo musuqmaasuq ah oo sababi doona qaladka. mydb_7.mdb
Faylka ayaa lagu hagaajiyay DataNumen Access Repair: mydb_7_fixed.mdb